> Resource > Video > Sida loo Beddelaan Torrent in MP3
Hadda files warbaahinta iyo aad u badan ayaa diyaar u ah in lagala via torrent leh tayo wanaagsan leh iyo xawaaraha ku ool ah. Waxaad u badan tahay in qaban karo tiro ka mid ah files torrent, waayo, videos, caadi ahaan waxay ku MP4, MKV, AVI, wmv, MOV, iwm; u Cajalado, loo arko in AAC, M4A, WMA, OGG, MP3, iwm Haddii aad jeclaan lahaa in la helo wada hadal ah ama cajiib ah music asalka ka videos, ama hubi in files audio hadda si fiican ula shaqeeya qalabka oo dhan, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad iyaga loogu badalo in ay MP3, qaab ku dhawaad ​​lagu taageeray by kasta oo goobaha ciyaaryahan music iyo music.
Si loogu badalo torrent in MP3, waxaad u baahan tahay torrent adag oo dareen leh in MP3 Converter sida Wondershare Video Converter , kaas oo bixiya aalladda-degdeg ah xawaaraha diinta iyo ilaaliyaa tayada saxda audio. Halkan sida loo sameeyo.
Download Free version maxkamad durdurka in MP3 Converter ah:
Fiiro gaar ah : maqaalkan inta badan diiradda on torrent inay diinta ka MP3 Windows. Haddii ay dhacdo in aad sidaas samayso ee Mac, waxaad tidhaahdaan, beddelid files torrent in qaab MP3 ee Mac socda Mac OS X Snow Leopard, Libaaxa iwm, waxaad ka akhrisan kartaa tutorial this: User Guide of Video Converter u Mac .
Talaabada 1: Import files torrent durdurkii in MP3 Converter
Guji "Add Files" icon inay ku shuban ah torrent videos aad rabto in aad si loogu badalo. Ama si fudud iyaga si toos ah u jiidin suuqa kala barnaamijka. Barnaamijka ayaa lagu taageerayaa dhow wax talooyin ah qaabab video / audio; waxaad ku shuban kartaa files kala duwan by haysta hoos "Ctrl" button markii xulashada files. Haddii aan xaq, kaliya ku dhacay "Delete" button.
Talaabada 2: Dooro MP3 format sida wax soo saarka
Clickthe qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad, iyo dooran "MP3" ka "Qaabka"> "Audio".
Haddii aad jeceshahay si ay u qeexaan buugga wax soo saarka, riix saddex dhibcood oo ayan ku jirin doorasho Folder Output ka dibna sheeg folder wax soo saarka. Waxa kale oo aad ka bixi kartaa sida defaulted, ka dibna riix "Open Folder" in ay si deg deg ah ay helaan files gediyay.
Talo: Haddii aad rabto in aad hesho qayb ka mid ah la doonayo ee music video clip ka baxay oo dhan, ama file asalka loo kala qaybiyey dhowr qaybood, ama iyaga ku milmaan galay clip dhamaystiran, waxaad isticmaali kartaa ay feature tafatirka gundhig. (Waayo, "jar", "isku darsamaan oo dhan videos galay mid ka mid file", dooro video clip iyo xaq u guji dooranayaan, waayo, kala, guji "Settings" doorasho si aad u hesho dejinta uu furmo suuqa, ka dibna hubi sanduuqa kala dooratid by waqtiga ama size.)
Talaabada 3: torrent in MP3 diinta Bilow
Guji "Beddelaan" marka wax walba ayaa lagu wadaa, ka dibna la durduray in MP3 Converter dhamaystiri doono beddelaad si toos ah aad u. Converter video Tani waa mid aad u hufan ee diinta, iyo bar horumarka idin tusin doonaa boqolkiiba iyo waqtiga soo hadhay.
Iyada oo taageero ka xirfadeed Wondershare Video Converter , waxaad si fudud u bedeli karaan videos in videos, Cajalado in Cajalado, Macdan Cajalado ka videos. Sidaas, ciyaaro files torrent mar walba meel kasta ma aha arrin adag. Isku day inaad hadda!
Sida loo Beddelaan Ustream in MP3 la Click ah
Sida loo Download iyo Beddelaan VEVO Videos in MP3
Sida loo Download Music ama video ka YouTube Free
Sida loo ciyaaro aad videos in VLC la AirPlay
Sida loo sameeyo HTML Photo Gallery u Website